Sanatar Ilyaas: Walaac badan ayaan ka qabaa in amniga koonfur galbeed uu halis u galo doorashada darteed – Kalfadhi
Sanatar Ilyaas Cali Xasan oo ka mid ah xildhibaannada Aqalka Sare ee deegaan doorashadoodu tahay maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay xaaladda maamulka Koonfur Galbeed xilli ay doorasho kusoo wajahantahay.
Hadal uu soo dhigay bartiisa facebook-ga ayaa ui dhignaa sidaan “ Waxaan aad uga walwalsanahay sida ay usocto diyaar garowga doorashada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan dhanka amniga iyo Fara-gelinta” .
Waxa uu sheegay in shacabka Koonfur Galbeed looga baahanyahay in ay ilaashadaan midnimadooda “ Waxaana xasuusinaayaa Shacabka KG taariikhihii madoobaa iyo dhibaatooyinkii u gaarka ahaa ee ay deegaannadaani soo mareen.” Ayuu sidoo kale yiri Sanatar Ilyaas.
Waxa uu hadalkiisa baaq u diray dhammaan shacabka uu ku matalo kurisga ee Koonfur Galbeed “ Waxaana dhammaan dadka degan deegaannada Koonfur Galbeed ugu baaqaayaa iney ilaashadaan midnimadooda iyo amnigooda iyaguna ay go’aansadaan ciddii ay ku aaminaayaan hoggaamintooda.”
Halkaan ka akhriso taariikhda Sanatar Ilyaas